सेयरटी यो एक महान अनुप्रयोगको %०% हो Martech Zone
सेयरटी यो एक उत्तम अनुप्रयोगको %०% हो
बिहीबार, डिसेम्बर 31, 2009 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
जब ShareThis सुरूवात भयो, म साइटमा भएको भाइरल आइकनहरूको सूची हटाउन र यसलाई एक सरल बटनको साथ प्रतिस्थापित गर्न उत्साहित थिएँ। समस्या यो हो कि बटन मेरो ब्लगमा एक दयनीय असफलता भएको छ। सोशल मिडिया साइटहरूमा सयौं सन्दर्भ र हजारौं उल्लेख भएका पोष्टहरूमा, शेयरटीहरू दश पटक मुनि प्रयोग गरिएको थियो!
सेयरथिससँग समस्या यो छ कि यो हो सजिलो छैन पाठकको लागी।
मानौं, उदाहरणको लागि, पाठकले उनीहरू ट्विटरमा फेला परेको कहानी साझा गर्न चाहन्छन्।
तिनीहरूले माउसओभर गर्नुहोस् साझेदारी लि link्क।
तिनीहरूले ट्विटरमा क्लिक गर्नुपर्दछ।
तिनीहरूले लगइन प्रदान गर्नुपर्नेछ।
तिनीहरूले एक पासवर्ड प्रदान गर्नुपर्दछ
तिनीहरूले क्लिक गर्नुपर्दछ पोस्ट.
धेरै चरणहरू। धेरै धेरै चरणहरू।
म भन्छु कि शेयरटिhis 50०% छ किनभने उनीहरूले प्रकाशकको ​​अनुभवमा धेरै ध्यान दिन्छन् र प्रयोगकर्ताहरूको अनुभवमा पर्याप्त ध्यान दिदैनन्। यदि तिनीहरू एक साधारण कुरा गर्छन् भने शेयरटिससँग उत्कृष्ट अनुप्रयोग हुन सक्ने सम्भाव्यता छ - यसलाई साझेदारी गर्न सजिलो बनाउनुहोस्.
सेयरबक्स एक राम्रो सुविधा थपिएको थियो - प्रयोगकर्ताहरूले अब साझेदारी गरेका वस्तुहरू हेर्न सक्दछन्। यद्यपि यो पर्याप्त छैन।
एक प्रयोगकर्ताको रूपमा, मँ शेयरटीसमा लगइन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ एक पटक र मेरो सामाजिक नेटवर्कहरू सेट अप गर्नुहोस् एक पटक। जब म अर्को वेबसाइटमा जान्छु ... मँ पहिले नै सेयरटीसमा लग ईन हुनुपर्दछ त्यसैले म यसलाई ट्विटर, फेसबुक वा अन्य नेटवर्कमा पास गर्न केवल बटन क्लिक गर्न सक्दछु (जस्तै Tweetmeme ट्वीटरका लागि गर्छ)। लगि on छैन ... विवरणहरू भर्ने छैनन् (तिनीहरू वैकल्पिक नभएसम्म) ... केवल साझेदारी गर्नुहोस्!
म २०१० मा कसरी साझेदारीती विकसित हुन्छु भनेर हेर्नको लागि अगाडि हेर्छु। म यसलाई यहाँ ब्लगमा राख्दै छु किनकि यसले केही मूल्य प्रदान गर्दछ। सम्भाव्यता धेरै छ, यद्यपि धेरै।
के कपर्निकस वा अरस्तु तपाईंको व्यवसाय चलाउँदैछ?
B5B ब्लगिंग को2कुञ्जी